आदेश सण्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् सम्बन्धहरू
समान चिन्ह (=) दुई placeholders सँग घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> = <?>आदेश सञ्झ्यालमा सिधा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ.
... सँग बराबर छैन
नेक प्रतिमा वाआदेश घुस्दछ समान रूपमा दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> नेक <?>आदेश सञ्झ्यालमा.
... सँग परिचायक
क्यारेक्टरपरिचायक (कन्ग्रोइन्ट) सम्बन्ध दुई placeholders सँग घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> equiv <?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ.
... सँग अर्थोजोनल
क्यारेक्टर अर्थोजोनल (दायाँ कोण) सम्बन्ध दुई प्लेसहोलडरहरू सँग घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> ortho <?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ.
भाग क्यारेक्टर घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> divides <?>आदेशसञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ.
यो प्रतिमाले भाग गर्न नमिल्ने क्यारेक्टर घुसाउँदछ. तपाईँले <?>ndivides<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
...भन्दा कमसम्बन्ध घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?>lt<?> वा <?> < <?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
...भन्दा बढी सम्बन्ध घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> gt <?> वा <?> > <?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
लगभग ... सँग बराबर
लगभग बराबरसम्बन्ध दुई placeholders सँग घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?> approx <?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ.
... सँग समानान्तर
समानान्तर सम्बन्द दुई प्लेसहोलडरहरू सँग घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>समानान्तर<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
... भन्दा कम वा बराबर (स्ल्यान्टेड)
... भन्दा कम वा बराबर सम्बन्ध दुई प्लेसहोलडरहरू सँग घुसाउनुहोस् तपाईँले <?> leslant <?>आदेश सन्ज्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
... भन्दा बढी वा बराबर (स्ल्यान्टेड)
घुसाउनुहोस् भन्दा ठूलो वा समान सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँघ. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>गेस्ल्यान्ट<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
... भन्दा समान वा बराबर
घुसाउनुहोस् समान वा बराबर सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डर सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>सिमेक<?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
... सँग बराबर
घुसाउनुहोस् सँग बराबर सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> प्रप <?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
ॐ... भन्दा कम वा बराबर
ॐघुसाउनुहोस् भन्दा कम वा बराबर सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> ले <?> वा <?> <= <?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
ॐ... भन्दा बढी वा बराबर
ॐघुसाउनुहोस् भन्द ठूलो वा समान सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> गे <?> वा <?> >= <?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
ॐ... सँग समान
यो प्रतिमाले घुसाउँदछ समान सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>सिम<?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
... सँग नजिक
घुसाउनुहोस् मार्फत सम्बन्ध प्रतीक दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> मार्फत <?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
डबल बाँण बायाँ सूचक
लोजिकल सम्बन्ध घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत बायाँ सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ dlarrowआदेश सञ्झ्यालहरूमा.
डबल बाँण बायाँ र दायाँ तर्फ सूचीत गर्दा
लोजिकल सम्बन्ध घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत गरिएको बायाँ र दायाँ दुई सञ्चालनकर्ताहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ dlrarrowआदेश सञ्झ्यालहरूमा
डबल बाँण दायाँ सूचीत गर्दा
लोजिकल सञ्चालनकर्ता घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत सँग दायाँ दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ drarrowआदेश सञ्झ्यालहरूमा.
लोजिकल सञ्चालनकर्ता घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत सँग दायाँ दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ precआदेश सञ्झ्यालहरूमा।
श्रृङ्खलाबद्व चिन्ह दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घुसाउनुहोस् तपाईँलेsuccआदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ।
लोजिकल सञ्चालनकर्ता घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत सँग दायाँ दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अघि बढ्छआदेश सञ्झ्यालहरूमा।
लोजिकल सञ्चालनकर्ता घुसाउनुहोस् बाँण डबल पट्टी सूचीत सँग दायाँ दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ preccurlyeqआदेश सञ्झ्यालहरूमा।
निर्माण गर्न अझ भन्दा ठूलो सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग, टाइप गर्नुहोस् <?> gg <?> वा >>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
टाइप गर्नुहोस् ll वा <<आदेश सञ्झ्यालहरूमा घुसाउनका लागि अझ भन्दा कम सम्बन्ध सूत्रमा.
परिभाषित गरिन्छ सम्बन्ध दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग टाइप गरेर घुसाइन्छ <?>def<?>.
घुसाउनुहोस् चित्र अनुकूलन क्यारेक्टर टाइप गरेर दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग <?> transl <?>आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
<?>transr<?> आदेशले सक्कली घुसाउँदछ अनुकूलन क्यारेक्टर दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग.
जब सूचना म्यानुअली घुसाइन्छ आदेश सञ्झ्यालहरूमा, टिप्पणी गर्नुहोस् कि सञ्चालनकर्ताहरूको सङ्ख्यालाई ठीक बनावटका लागि खाली स्थानहरू आवश्यक छ. यो विशेष रूपमा ठीक हि यदि तपाईँ प्लेसहोल्डरहरूको सट्टा मानहरू सँग कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने. उदाहरणका लागि, "is considerably greater" सम्बन्धका लागि, टाइप गर्नुहोस् कि त १० gg १ वाagg b.